Paul Pogba vs N’Golo Kante, Diego Costa vs Marcos Rojo & Seddex Meelood Oo Ay Ku Kala Badinkaraan Manchester United VS Chelsea – Kooxda.com
Home 2017 April Dib U Eegid, Ingiriiska, Uncategorized, Wararka Maanta, Warbixino Paul Pogba vs N’Golo Kante, Diego Costa vs Marcos Rojo & Seddex Meelood Oo Ay Ku Kala Badinkaraan Manchester United VS Chelsea
Paul Pogba vs N’Golo Kante, Diego Costa vs Marcos Rojo & Seddex Meelood Oo Ay Ku Kala Badinkaraan Manchester United VS Chelsea
April 16, 2017 · by	Jamuuni · 0
Kooxda Manchester Unietd ayaa kulan xiiso badan garoonkeeda kusoo dhoweeyndoonta Chelsea,waxaana kulankaan uu ka tirsanyahay horyaalka Primer League.
Macalin Mourinho waxaa uu wajahayaa kooxdiisa hore ,waxaana uu doonayaa inuu ka badiyo maadaama xilli ciyaareedkaan markii 3aad ay kulamayaan.
Kulankaan waxaaa uu noqondoonaa midka ugu xooga badan waayo Mourinho waxaa uu ku dagaalamidoonaa sidii uu Chelsea ku hor istaago.
Hadaba Kooxda.com ayaaa kuusoo koobeeysa 3 Meeelood Oo Chelsea iyo Manchester United Ku Badindoonaa.
Zlatan Ibrahimovic Vs Cesar Azpilicueta
Macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa diyaar u ah inuu iska celiyo ciyaaryahankaan awooda badan ee Zlatan Ibrahimovic waxaana lagu diridoonaa Cesar Azpilicueta , waxaana xidigaan u dhashay wadanja Spain laga doonayaa inuu iska joojiyo Zalatan.
35-sano jirkaan waa halista ugu weeyn ee Manchester United ay wajihikarto waxaana macquul ah in ciyaaryahankaan saameeyey Antonio Conte.
Waa dagaal kale oo dhexmaridoona labadaan ciyaaryahan oo u dhasheen wadanka France waxaaana macquul ah in markaan uu boorka iska jafo Paul Pogba.
N’Golo Kante ayaa laba gool ka dhaliyey Manchester United kulankii ugu weynaa ee ka dhacay garoonka Stamford Bridge waxaana kooxda Jose Mourinho ay dooneysa inay iska qabato Odeygaan shabaqooda bartay.
Diego Costa vs Marcos Rojo
Labadaan waa laba isla waalan marka laga hadlo qaab ciyaareedkooda cajiibka ah iyo sidoo kale sida ay labadaan dagaal abuuriyaal u yihiin waxaana macquul ah inay saameeyn ku yeeshaan kulanka.
Diego Coast waa ciyaaryahan inta badan roosaha u qal qaaliya xidigaha kale waxaana macquul in caawa Rojo la dagaal geliyo.
Filed in: Dib U Eegid, Ingiriiska, Uncategorized, Wararka Maanta, Warbixino